TTSweet: ပန်းလေးများ အမှတ်တရ ... ကကြီးမှ အ (အဆက်)
Posted by T T Sweet at 10:58 AM
မြတ်နိုး May 31, 2010 at 1:15 PM
million thanks, ama...
i brought in my book mark.
ကိုပေါ May 31, 2010 at 8:57 PM
ပန်းထိမ်ငို။ နာမည်က အဆန်းပဲ။ ဦးဗဂျီငို ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြားဖူးတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေက အဲသည်လို နာမည်မျိုးတွေ သဘောကျတယ်ထင်ပါရဲ့။
အခုခေတ်တော့ အဲသည်လို နာမည်မျိုး မပေးကြတော့တာ ကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ့်ရည်နဲ့ဆို “ဗဂျီငို” လို့ အချောင် အခေါ်ခံနေရကိန်းရှိတယ်။
လသာည May 31, 2010 at 9:57 PM
ပန်းထိမ်ငိုဆိုလို့ ညီမတို့ မြန်မာပြည်က အိမ်မှာ ပန်းထိမ်ငိုရှိတယ်..။
ဖယောင်းပန်းတော့ အခုမှ သိတာ။ အားလုံး လှတယ်နော်။ စိတ်ကို ကြည်သွားတာပဲ..
sonata-cantata June 1, 2010 at 10:58 AM
နောက်လည်း လာ လာ ယူဦးမယ်နော်...
လှသောပန်း.. မွှေးသောပန်း.. မင်္ဂလာရှိသောပန်း..ဖြစ်ကြပါစေလို့
မြတ်နိုး June 2, 2010 at 12:00 AM
အမ..ဖယောင်းပန်းက မရမ်းစေ့ရောင်လေးတွေလားလို့..အဲဒါ သစ်ခွတမျိုးထင်တာပဲ။
မြတ်နိုး June 2, 2010 at 12:01 AM
ပီးတော့ အနံ့လေးလဲ သင်းတယ်အမ။
အို..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်။အများကြီး အများကြီး ကျေးဇူး
T T Sweet June 2, 2010 at 9:48 AM
မြတ်နိူးပြောမှ အဲလို ခရမ်းရောင် ဖယောင်းပန်းမျိုးလဲ မြင်ဘူးတာ သတိရတယ်။ အပေါ်မှာ အသစ်တင်ပေးထားတယ်နော်။ ပန်းကြိုက်သူချင်းတွေ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ။
အစ်မသီတာရေ ... ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။ အစ်မတို့ မိသားစုအတွက်လဲ ထပ်တူထပ်မျှဆုတောင်းပေးပါတယ်။
လသာညရေ ... အစ်မတိ်ု့ရန်ကုန်က အိမ်မှာလည်း ပန်းထိမ်ငိုတွေ စိုက်ထားတယ်။ အမေက ဘုရားပန်းအတွက်တဲ့။ ပန်းတွေ အရမ်းပွင့်တယ်။
တန်ခူး June 8, 2010 at 2:41 PM
သယ်ရင်းရေ... ပန်းချစ်သူဆိုတော့ (ခင်မောင်တိုးသီချင်း မဟုတ်ဘူးနော်) ပန်းလေးတွေကို ကြည်ကြည်နူးနူးငေးသွားတယ်... ideaလေးကလဲ ပန်းလေးတွေလို လှလိုက်တာ... ပန်းထိမ်ငိုက အိမ်မှာ စိုက်ထားတယ်... အရမ်းအဖြစ်မြန်တယ်... ခုတောင် ပွင့်နေတယ်.. ဒါပေမယ့် တို့ အပွင့်ကပန်းခရမ်းရောင်လေး... ဂရုစိုက်စရာသိပ်မလိုဘူး...
Anonymous June 25, 2010 at 6:25 PM
အမရေ .. အမတင်ထားတဲ့ ပုံထဲက ပန်းက ပုန်းညက်ပန်းပါအမ သရဖီပန်းမဟုတ်ပါ..
အသီးကို ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်.. ပုန်းညက်ပန်းက အသီးနဲ. သရဖီပန်းပင်က အသီးက ကွာပါတယ်..
ညီညီ August 22, 2012 at 8:32 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်မရေ။ ကျနော်တစ်ချို ပန်းလေးတွေ မြင်ပဲမြင်ဖူးတာ မြန်မာလိုအခေါ်ကိုသိပ်မသိဘူး။ ခုမှပုံကောနာမည်ကော တွဲမိတော့တယ်။
Thar yu June 5, 2012 at 3:49 PM
TTSweet ခင်ဗျာTTsweet အမေ ဘုရားတင်ထားတယ်ဆိုတဲGlobba စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အသေးစိတ် သိပါရစေ။စတင်စိုက်ပျိုချိန် ဒေသ မျိုးပွါးပုံ အရေအတွက် ဆေးဝါး မြေဆီအမျိုးအစား အကွာအဝေး ပန်းခူးချိန် ထုပ်ပိုး လေ့လာနိုင်ရန်အညွှန်းတို့ကိုစုံလင်စွာဖေါ်ပြပေးပါခင်ဗျာ။လေးစားစွာဖြင့် သာယု
Thidar Soe November 5, 2018 at 2:43 PM
အင်ကြင်းပန်းအစစ်က အရမ်းမွေးပါတယ် တောအင်ကြင်းလို့လည်းခေါ်မယ်ထင်တယ် နွေဦးမှာပွင့်တယ် အနီ/ အဖြူရှိတယ် အပွင့်က သေးသေးလေးနဲ့ အခိုင်လိုက်ပွင့်ပါတယ် (အင်ကြင်းပွင့်တဲ့ ရာသီဆိုရင် တစ်တောလုံး/တစ်တောင်လုံးမွှေးတယ်လို့ ပြောကြတယ် ) အိမ်မှာ ဘုရားပန်းအိုးထိုးထားရင် အိမ်အ၀င်ထဲကတစ်အိမ်လုံး မွှေးပါတယ်။ အခုပုံထဲကအင်ကြင်းက လုမ္မနီအင်ကြင်းလို့လည်း ခေါ်တယ်ထင်တယ် အနံက အီလည်လည်ကြီးနဲ့ အပွင့်အရမ်းကြီးတယ် (ကိုယ်တွေတော့မကြိုက်ဘူး နံလို့/ အပွင့်ကြီးပြီး ပန်လို့လည်းမရ)